Akhriso: Meereeyaha Guud ee Hey’adda Duulista iyo Saadaasha Hawada oo shaqada laga joojiyay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Akhriso: Meereeyaha Guud ee Hey’adda Duulista iyo Saadaasha Hawada oo shaqada laga joojiyay * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhriso: Meereeyaha Guud ee Hey’adda Duulista iyo Saadaasha Hawada oo shaqada laga joojiyay
By A warsame on 10th July 2018
War goor dhow na soo gaaray ayaa sheegaya in shaqo joojin lagu sameeyay maareeyaha Guud ee Hey’adda Duulista iyo Saadaasha Hawada Yuusuf Cabdi Cabdulle (Yuusuf Jaalle).
Qoraal ka soo baxday Xafiiska Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Maxamed C/llaahi Oomaar oo ku taariikheysnaa 9 bisha July ayaa lagu sheegay shaqadii iyo saxiixii Maareeyaha Guud ee Hey’adda Duulista iyo Saadaasha Hawada Mr Yuusuf Jaalle.
Sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in si KMG ah shaqada Hey’adda Duulista iyo Saadaasha Hawada loogu dhiibay Maareeye kuxigeenka Hey’adda Duulista iyo Saadaasha Hawada.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in shaqo joojintan lagu sameeyay Maareeyaha ay salka ku heyso arrimaha is qabqabsiga ka dhex jira Shirkadaha Diyaaradaha oo isku hayay arrimaha xajka, sidoo kale waxaa socday qorshe la doonayo in dib lagu soo nooleeyo Shirkadda Diyaaradaha Soomaaliya ee Somali Airlines oo ay wadaan siyaasiyiin iyo xubno ku dhow Madaxtooyada.
Yuusuf Jaalle ayaa ka mid ahaa saaxibada Madaxweyne Farmaajo, isagoo ahaa Madaxii Ololaha Doorashada, waxaa muranka maalmahan ka jiray is qabqabsiga arrimaha Xajka iyo qorshayaal ka socday Labada xafiis waxay u muuqdaan kuwo isku xiran, marka loo eego shaqsiyaadka ku lugta leh arrimahan oo aad ugu dhow Madaxweynaha.
Maalintii shalay ayay aheyd markii Ra’iisul Wasaare Kheyre uu xilka ka qaaday wasiirkii Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Xasan Macalin Xuseen, isagoo xilka Wasaaraddan hayay wax ka yar labo bilood.
Jadwalka doorashada xubnaha Aqalka Sare ee Koofur Galbeed oo la shaaciyay
Qeyb ka mid ah Liiska Tartamayaasha Aqalka Sare Koofur Galbeed oo la shaaciyay
Wasaaradda Caafimaadka oo digniin kasoo saartay soo laba kacleynta COVID-19
Odayaasha dhaqanka Koofur Galbeed Soomaaliya oo shuruud ku xiray qabashada doorashada
Beesha Caalamka oo war ka soo saartay doorashada , farina u dirtay madaxda Soomaalida
Qarax ka dhacay Magaalada Kismaayo iyo koox Ciyaartoy ah oo ku le’atay
Somaliland oo dhex dhexaadineysa Beelo Soomaaliyeed oo ku dagaalamay gudaha Puntland
Axmad Madoobe oo war ka soo saaray doorashadii maanta ka dhacday Kismaayo
Xildhibaanadii ugu horreeyey Aqalka Sare oo la doortay
Xildhibaanada Gobalada Waqooyi ee Golaha shacabka oo war murtiyeed xasaasi ah kasoo saaray doorashada
Deg Deg: Doorashada Xildhibaanada Aqalka Sare oo ka bilaabatay Kismaayo
Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka Oo Gaaray Kismaayo
Fahad Yasiin oo magacaabay Madaxa Shaqaalaha Hay’adda NISA.
RW Rooble oo war kasoo saaray soo gudbinta jubbaland ee liiska musharaxiinta Aqalka Sare
Guddi loo saaray “baarista” kiiska Ikraan Tahliil Faarax !
Jubbaland oo shaacisay qaar ka mid ah musharixiinta aqalka sare iyo jadwalka doorashada oo la soo bandhigay
Raisul Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu horkacayo oo dalka ambabaxay
Soomaaliya iyo Mareynkanka oo ka wada hadlay amniga doorashooyinka
Ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug oo degaano la wareegay
Rooble oo kala hadlay Madaxda Madasha Wadatashiga Qabashada Doorashada Aqalka Sare
Raisul Wasaare Rooble oo magacaabay Guddi ka kooban 13-Xubnood (Akhriso Magacyada)
Xildhibaanada qaban qaabinayada Doorashada Aqalka Sare ee KG oo la magacaabay
Guddiga Doorashada Hirshabelle oo ku heshiin la’ habraacyada Guddi hoosaadka+faragelinta lagu hayo
Ciidamada Soomaalida oo fariisan ka sameystay aaga dagaalka ee Tigrey
Ciidamada Dowladda iyo kuwa Galmudug oo Al shabaab kala wareegay deegaano cusub
AMISOM oo soo bandhigtay ciidan ay u diyaarisay Amniga doorashooyinka dalka
Madaxweynayaashii hore ee dalka oo kulamo kawada degmada Cadalle
Midowga Musharaxiinta oo RW Rooble ku taageeray talaabada uu qaaday
RW Rooble oo xilka qaadis ku sameeyay saraakiil sare oo ka tirsan NISA
MD Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo boob ku haya kuraasta Baarlamanka ee taallla Puntland
Madaxweynayaashii hore ee dalka oo si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Cadalle
Booliska Somaliland oo xabsi sharci darro ah dhigay Madaxa hay’adda Dhaxalreeb
Natiijada Imtixaanka Shahaadiga Soomaaliya oo la shaaciyey
Maleeshiyaad katirsan Al shabaab oo isku dhiibay ciidanka dowladda ee Galmudug